धरान निषेधाज्ञामा कस्तो छ ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
धरान निषेधाज्ञामा कस्तो छ ?
धरानमा १० औं पटकभन्दा बढी निषेधाज्ञा अर्थात् बन्दाबन्दी हुँदा (२४ तस्वीर र भिडिओ)
धरानः दोस्रो लहरको कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न धरानमा आजदेखि ७ दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले बैशाख १६ गते राति १२ बजेदेखि गते निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । धरानमा गत वर्षको चैत यता लगभग १० पटकभन्दा बढी लकडाउन, बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा जारी भइसकेको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मेहता बताउँछन् । ‘पहिला केन्द्रको निर्णयले लगातार लकडाउन घोषित थियो, पछि धरान उपमहानगरपालिकामा संक्रमित बढ्दै जाँदा लकडाउन पनि थप्दै ९ पटकभन्दा बढी त लकडाउन घोषित गर्नुपरेको थियो ।’
११ बजेअघि बजार लगभग बन्द थियो तर त्यसपछि बजार बन्द हुँदा सुनसान झैं बनेको छ । यातायात जोरविजोरमा चलिरहेका छन् ।
निषेधाज्ञा कार्यान्वयनका लागि बजार क्षेत्र र चोक–चोकमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी खटिएका थिए । मालबहाक सवारी साधन, स्वास्थ्य सामग्री बोकेका सवारी साधन, प्रेस, इन्टरनेट, पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी, दूग्धजन्य पदार्थ बोकेका सवारी साधनहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि खुल्ला छन् । छिटपुटरुपमा निजी मोटरसाइकल सञ्चालन भएका छन् । धरान प्रवेश गर्ने सवारी साधनलाई तीनकुनेमा कडाइका साथ चेकजाँच गर्न थालिएको छ । अत्यावश्यक काम नपरी हिँड्नेलाई फिर्ता पठाइएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार धरानमा वैशाखयता मात्रै १९५ भन्दा बढीमा संक्रमण भइसकेको छ । यसमा धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर, प्रेस संयोजक, कर्मचारीलगायत पनि परेका छन् ।
नयाँ भेरियन्टको कोरोना संक्रमितहरुमा श्वासप्रश्वासमा समस्या, अक्सिजन लेभलमा समस्या, दिमागमा असर, छातीमा समस्या, ओंठमा समस्या हुने पाइएको विज्ञहरुको दाबी छ । तस्वीरहरुः हाम्रो कोशी आवाज
११ बजेपछि यसरी लाग्यो प्रहरी